कोरोना उपचारमा समन्वय अभाव : पोजेटिभ भेटिएको १२ घन्टापछि बल्ल अस्पताललाई जानकारी – Health Post Nepal
कोरोना उपचारमा समन्वय अभाव : पोजेटिभ भेटिएको १२ घन्टापछि बल्ल अस्पताललाई जानकारी
२०७६ चैत १२ गते १६:४०
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारी नेपालमा फैलिन नदिन सरकारले गरेको देशव्यापी लकडाउन जारी छ। रोग फैलिन र भित्रिन नदिन तथा सम्भावना घटाउन उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको दश मन्त्री सदस्य रहेको कार्यदलको अर्थ पनि समन्वयकै लागि हो।
तर, संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा एउटै परिसरभित्र रहेका राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कोरोना उपचारको भरोसा रहेको टेकु अस्पतालबीच नै समन्वय अभाव देखिएको छ। महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निकायबीच समयमै प्रभावकारी सञ्चारको निकै महत्व हुन्छ।
नेपालमा कोरोनाको तेस्रो संक्रमण प्रमाणित हुँदा नै यो समन्वय अभाव देखिएको छ। यो अभावका कारण सरकारका दुई निकायबीच नै असझदारीसमेत उत्पन्न भएको छ।
‘हामीले सोमबारयता १६ हाराहारीमा स्याम्पल पठाएका थियौं। मंगलबार राति नै एउटा पोजेटिभ भेटियो रे, अहिले त्यो पनि मिडियाबाट थाहापाइयो,’ टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले बुधबार दिउँसो १ बजे हेल्थपोस्ट नेपालसँग भने।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका राजेशकुमार गुप्ताले टेकु अस्पातालले पठाएको एक नमुना मंगलबार राति पोजेटिभ भेटिएको बताए। ‘बिरामीको बारेमा अरू कुरा अस्पतालमै सोध्नू, थप एउटा पोजेटिभ आएको हो,’ गुप्ताले भने।
गुप्ताले थप पोजेटिभ भेटिएको भनेर अस्पतालका विभिन्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गर्दा सबै नयाँ केसबारे अनभिज्ञ थिए। तर, त्यसको केहीबेरमै मन्त्रालयको वेबसाइटमा थप एउटा पोजेटिभ प्रमाणित भएको अपडेट भइसकेको थियो।
प्रयोगशाला व्यवस्थापनले बिरामी भर्ना गरेको अस्पताललाई समयमै जानकारी नदिई मिडियाबाट थाहा पाउनु अवस्था निकै दुःखद भएको डा. राजभण्डारीले बताए। ‘हामी चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जोखिम लिएर काम गरिरहेका छन् अनि हामीले चाहिँ पोजेटिभ केस थाहा पाउन मिडिया कुरेर बस्नुपर्ने?,’ उनले अक्रोशित हुँदै भने, ‘यस्तो अवस्थामा मैले डाक्टरहरूलाई काम लगाउन सक्दिनँ, मन्त्रालय र एनपिएचएलले नै बिरामी हेरोस्।’
कोरोनाजस्तो उच्च संक्रमक रोग पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा सुरुमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीदेखि बिरामी पक्ष र परिवारलाई जानकारी दिनुपर्छ। यसले नयाँ मानिसमा रोग सर्ने दर घटाउन र उच्च सावधानीसहित समयमै उपचारमा सहयोग पु-याउँछ ।
उनले मंगलबारै पोजेटिभ देखिएको भनिए पनि बुधबार दिउँसोसम्म कुनै रिपोर्ट वा इमेलबाट जानकारी नआएको सुनाए।
स्रोतका अनुसार उच्चतहको गोपनियता मेन्टेन गर्ने भन्दै प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले आफैं मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका उच्चअधिकारीलाई खबर गर्ने गरेकी छिन्। तर, प्रयोगशालाले एउटै कम्पाउन्डमा भएको अस्पताललाई १२ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म खबर गर्न उपयुक्त ठानेन।
घटनापछि प्रयोगशालाको रिपोर्ट मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अस्पतालका निर्देशक र कर्मचारी निर्देशकको कार्यकक्षमा भेला भएर यो प्रवृतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।
संक्रमण देखिएका ३२ वर्षे युवा चैत ५ गते दुबईबाट फर्किएका थिए। धादिङका ती युवा लक्षण देखिएपछि शनिबार टेकु अस्पताल पुगेका थिए। पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग समन्वय गरेर केही नभनिकनै उनलाई राति नै टेकु अस्पताल लगेर भर्ना गरिएको थियो।
भर्ना गरिएका व्यक्तिलाई संक्रमण प्रमाणित भइसकेको कुरा बल्ल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, हाउसकिपिङदेखि अस्पताल निर्देशकलाई समेत पत्तो दिइएको थियो।
कोरोनाजस्तो उच्च संक्रमक रोग पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा सुरुमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीदेखि बिरामी पक्ष र परिवारलाई जानकारी दिनुपर्छ। यसले नयाँ मानिसमा रोग सर्ने दर घटाउन र उच्च सावधानीसहित समयमै उपचारमा सहयोग पु-याउँछ । तर, सय मिटरको दुरीमा रहेका दुई संस्थाबीच सञ्चार प्रणाली र जिम्मेवारी बोध नहुँदा गम्भीर रोगको सन्दर्भमा पनि समन्वय अभाव देखिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा नमुना संकलन, प्रेषणदेखि रिपोर्ट कसरी र कति समयमा दिने भन्ने विषयमा पनि विशेष प्रोटोकल नै चाहिन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रोटोकल नहुँदा नेतृत्वको विवेक र व्याख्याका आधारमा चल्दै आएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला